Tsy maninona ny mitsipaka hevitra maharatsy | Martech Zone
Tsy maninona ny mitsipaka hevitra ratsy
Alarobia, Oktobra 3, 2007 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Rehefa miteny aho, toy ny nataoko androany, tamin'ny mpihaino mpandraharaha liana amin'ny fitorahana bilaogy, ity dia fanambarana iray izay matetika mamadika jiro ao an-dohany.
Eny. Afaka mandanjalanja ny hevitrao. Eny. Tsy maninona ny mandà ny hevitra ratsy. Manoro hevitra ny orinasa rehetra aho mba haneho hevitra mahonon-tena. Mamporisika ireo orinasa ireo ihany koa aho, na izany aza, mba hamakafaka ny fotoana mety sy ny loza mety hitranga amin'ny fanehoan-kevitra ratsy. Raha kiana manorina azo tanterahina na efa voavaha ny orinasanao dia manokatra fotoana mahafinaritra ho anao izany hanehoana mangarahara sy hanaporofoana fa tsy mihaino fotsiny ianao, fa mihetsika amin'ny fitsikeran'ireo mpitsidika anao.
Mampihomehy fa miara-mipetraka daholo isika rehetra milaza amin'ny olona fa misokatra sy mangarahara ny tadiavintsika ny orinasa sy ny mpampiasa antsika… fa rehefa afaka mangarahara isika, dia matetika no manome azy eritreritra faharoa. Mino aho fa misy ambaratonga amin'ny fanehoan-kevitra sy atiny ateraky ny mpampiasa izay tokony harahi-maso akaiky sy hodinihina:
Ny mpitsidika sasany dia hanao ratsy, maneso, maneso ary / na manambany tena. Amporisihiko ny orinasanao hamaly mivantana ireo olona ireo hanakanana ny toe-javatra ary hampahafantariko azy ireo fa tsy avelanao fotsiny ny atiny toy izany eo amin'ny tranokalanao. Mihevitra aho fa tsy misy olona hanome tsiny orinasa iray noho ny fandavany ny fanehoan-kevitra mety hanimba ny orinasany. Tsy resaka mangarahara izany, fa ny fiarovana ny orinasanao mba hahafahan'ny mpiasanao manohy mivelona amin'ny fivelomany.
Izany dia nilaza fa aza mandà ny hevitra ary mandroso toy ny tsy nisy n'inona n'inona. Raha nisy fahasahisànan'ny olona iray hanevateva anao tao amin'ny tranonkalanao manokana, dia hanana fahasahisanana izy ireo hanompa anao koa ao amin'ny tranonkalany. Ny fahafaha-manao raharaham-barotra dia ny miresaka amin'ilay olona 'ivelan'ny sisiny'. Na dia tsy azonao atao aza ny manarina ny toe-javatra, dia ny hahasoa anao no manao ny tsara indrindra vitanao.
Ny mpitsidika sasany dia hitsikera ny hevitrao, ny vokatra na ny serivisinao. Ity dia faritra volondavenona ahafahanao misafidy ny handà ny fanehoan-kevitra ary hampahafantatra azy ireo, na ny tsara kokoa - azonao atao ny miatrika ny tsikera ampahibemaso ary toa mahery fo iray. Azonao atao ihany koa ny mamela ny fanehoan-kevitra hipetraka… imbetsaka ny olona mahatsapa faly fa nanandrana sy nandroso. Amin'ny fotoana hafa, ianao gaga amin'ny isan'ny mpamaky izay hiaro anao!
Raha kiana sarobidy izany, angamba afaka miresaka amin'ny olona toa izao ianao…
Doug, azoko tamin'ny filahako antonony ny hevitrao ary tena fanehoan-kevitra lehibe izany. Aleoko tsy hizara an'io amin'ny tranokala - manantena aho fa azonao izany - fa ny hevitrao dia misy dikany betsaka aminay ary tianay ny hahatonga anao any amin'ny birao mpanolo-tsaina ny mpanjifa. Mety ho zavatra tianao ve ity?
Misy valisoa sy vokany amin'ny fanafenana ny maha-ratsy. Na dia mieritreritra aza ianao fa misisika ny bilaoginao hiala amin'ny tsy fitovizany, dia mety tsy hatoky ny mpamaky ianao - indrindra raha hitan'izy ireo fa manalavitra ny negativa foana ianao. Heveriko fa fandanjalanjana mitandrina io fa hivoaka eo ambony foana ianao rehefa afaka mamaha ny olana, na manazava am-pahatsorana ny lalanao hamakivakiana azy.
Ny fanehoan-kevitra tsara hatrany no maro an'isa amin'ny fanehoan-kevitrao…. Matokia ahy! Mahagaga fa mahafinaritra ny olona eto amin'ny tranonkala. Tamin'ny 'andro tanora' tao amin'ny tranonkala, ny teny ampiasaina amin'ny fanoratana mailaka mahatsiravina amin'ny olona hafa dia nantsoina hoe 'mirehitra'. Mbola tsy naheno firy momba ny olona 'nirehitra' aho saingy azoko antoka fa mbola misy izany.
Ny olana amin'ny 'lelafo' dia ny fipoahan'ny hatezeranao sy ny tsy firaharanao dia misy toerana maharitra eo amin'ny Internet. Toa tsy manadino mihitsy ny Internet… olona iray, any ho any afaka hamoaka ny fanehoan-kevitra malotoo. Azoko antoka fa navelako teo ny anjarako momba ny fanamarihana ratsy, fa amin'izao andro izao dia mifanaraka bebe kokoa amin'ny fitazomana laza tsara an-tserasera aho. Mino aho fa ny ankamaroan'ny olona (salama saina) dia mahalala ny lazany an-tserasera amin'izao fotoana izao ary hanao izay fara heriny hiarovana azy io.
Ny tranga mazava dia Ny fisehoan'i John Chow momba ny maniacal, na dia tsy dia misy aza, tetikasan'ny bilaogera hampiasa fanehoan-kevitra hanosehana ny raharaham-barotra amin'ny tsy marina. John dia nanao asa lehibe tamin'ny famotopotorana sy fanaporofoana ny tsy fahamarinan'ilay bilaogera resahina. Tonga lafatra ny fanoratan'i John ny lahatsorany… nanimba ny lazany manokana ity bilaogera ity. Vao nitory an'io i John!
Izaho manokana dia nifanena tamina mpamaham-bolongana izay nandrehitra ahy tamin'ny sasantsasany tamin'ny lahatsoratro. Nahagaga ny fanehoan-kevitra, ny ankamaroan'ny olona dia tsy nanisy fiheverana ny tsikera nataoko tamin'izy ireo… namaly tamim-paharikoriko ny maha-ratsy ny 'flamer' izy ireo. Etsy an-danin'ilay farantsakely, nisy mpitoraka bilaogy iray (izay fanta-daza) nanadino ny trosany tamiko noho ny vokatra novolavolako ho azy. Izy koa dia nanalavitra ny masoivohon'ny famoriam-bola napetrako taminy.
Tsy 'hivoaka' azy ao amin'ny bilaogiko aho na dia tena maka fanahy be aza. Mino tsotra fotsiny aho fa hojeren'ny olona ho mpampijaly. Mino aho fa hahazo izay tonga any aminy indray andro any izy. Ny tontolon'ny bilaogy dia mirona ho tambajotra mpamatotra namana sy mpiara-miasa izay mifaly. Ireo 'mpankahala' dia toa eo an-tsisiny ary ireo 'flamers' dia eo ivohony.
Aza mametraka eritreritra be loatra amin'ny tsy fanjarian-tsoa amin'ny Internet… ny loza ateraky ny mangarahara dia mihoatra lavitra noho ny tombotsoan'ny tambajotra sy ny fananganana fahefana ary ny laza iray. Ary aza hadino velively fa tsy maninona ny mandà ny fanehoan-kevitra ratsy.
Tags: Anita CampbellMarketing amin'ny fantsom-paritraJohn JantschMichael Stelznerfihaonambe an-tserasera fihaonana an-tampon'ny orinasa kelyfandraharahana madinikafihaonamben'ny orinasa kelyTrends kely
Ahoana ny fananganana sarintany misy CSS
Oct 4, 2007 amin'ny 8: 04 AM
Lahatsoratra tsara, Doug. Azo antoka fa faritra volondavenona io izay tsy takatry ny olona maro. Ny tanjona ankapobeny, mazava ho azy, dia ny hakingan-tsaina (mora lazaina toy izay vita, fantatro). Ny fahafahanao * mahavita * fanehoan-kevitra antonony sy hisorohana ireo teny ratsy dia tsy midika hoe tokony hiditra anaty ala ianao ary hiezaka ny hampiseho sary diso tafahoatra an'ny fikambanananao, ny vokatrao na ny marikao.
Raha ny marina, ny firesahana hevitra misy fanakianana dia mety ho mahery vaika kokoa noho ny fanehoana teny mahafinaritra fotsiny. Zava-misy kokoa izy io ary mampiseho tanjaka sy fiahiana.
Oct 4, 2007 amin'ny 9: 19 AM
Tsy azoko antoka ny fanakanana ny karazana # 2, hevitra tsara ilay hevitra mitsikera. Indrindra amin'ny filazanao fa tsy te “hizara izany amin'ilay tranonkala ianao - antenaiko fa azonao izany.”
Tsoriko fa tsia tsy azoko.
Ary ny fanasana hiditra ao amin'ny Birao Mpanolo-tsaina ny mpanjifa - inona izany? Fe-potoana fohy tsy misy dikany? Inona no mety indrindra amin'ny mailaka isam-bolana mametraka fanontaniana iray? Sa tena Birao izay misy olona mahafeno fepetra ho valin'ny fanehoan-kevitra ratsy iray? Miahiahy aho fa maro no hiafara amin'ny finoana fa ny 'fifantenana' toy izany dia fomba iray hamafana ny fanehoan-kevitra fotsiny ary hatao miaraka aminy.
Raha hamafana ny hevitry ny mpitsikera marim-pototra izay tsy "ratsy" ny fikambanana iray dia tokony avelan'izy ireo hijoro izany. Raha tsy izany dia sivana amin'ny defacto amin'izao vanim-potoana mangarahara izao.
4 Okt 2007 amin'ny 12:28 PM
Salama Jonathan, mieritreritra aho fa mifanitsy isika, angamba tsy dia nazavaiko tsara ny momba ahy. Tena miresaka bilaogy fandraharahana aho fa tsy bilaogy ankapobeny. Ao amin'ny bilaogy orinasa iray dia mino aho fa ny hevitra mitsikera tsirairay dia mila dinihina tsara mba hanapahana hevitra raha misy fahamendrehana amin'ny famoahana ilay hevitra.
Fanehoan-kevitra toy ny, "Tiako ny fampiharana anao nefa fantatrao ve fa afaka mandingana ny fizotran'ny tenimiafinao ianao amin'ny fanaovana x, y ary z?". Fanehoan-kevitra manorina, ary manampy, fa zara raha misy olona tianao hapetraka ho an'ny besinimaro satria mety hampidi-doza ny orinasanao.
Ny birao mpanolo-tsaina ho an'ny mpanjifa dia mazàna vondrona mpanjifa 'atokisana' izay iantsoanao tsy tapaka mba hanombanana ireo vokatrao sy serivisinao hanomezana torohevitra. Raha manana olona mitsikera ny orinasanao ianao ka mamela anao hanana hafatra manorina eo amin'ny tranokalanao, dia mety tokony handray azy ireo amin'ity fahaiza-manao ity ianao.
Na miankina aminao ny na tsia ny hevitrao - miombon-kevitra aminao aho fa, matetika kokoa, ny famoahana tsikera ratsy dia AZO andoavany rehefa ela ny ela raha toa ka mino ny tenany ny orinasanao hamaha ny olana.
Misaotra nanampy an'ity resaka ity!
7 Okt 2007 amin'ny 9:33 PM
Tsy afaka milaza aho fa tsy miombon-kevitra aminao aho, indrindra fa ny ohatra navelanao, saingy miahiahy aho (tsy ady hevitrao) amin'ireo orinasa izay toa faly be loatra amin'ny fametrahana ny olona amina karazana fahaiza-manao torohevitra ho fitaovana hanosehana azy ireo hiala . Nandray anjara tamin'ny politika aho ary mahita toe-tsaina tsy voafehy be loatra amin'ny hafatra ka manjary mandiso fanantenana.
Raha lazaina izany, ny fanehoan-kevitra manala baraka dia tokony hisy fanazavana vitsivitsy. “Tsy mahomby ny vokatrao”.
Oct 4, 2007 amin'ny 10: 18 AM
Heveriko fa tonga ao am-pon'ny olan'ny “fitoniana” ianao amin'ny fanaovana bilaogy. Toy izany koa ny fanalefahana izay lazain'ny mpiasa ao amin'ny bilaogin'ny orinasa.
Heveriko fa misy karazana "mangarahara" roa izay mitranga noho ny fanaovana bilaogy ataon'ny orinasa mavitrika:
1. Resadresaka tena izy amin'ireo mpanjifanao.
2. PR manokana rehefa manao hadisoana ianao.
Ny voalohany dia tena tombony azo amin'ny fiakaran'ny bilaogy. Mora kokoa ny mahazo valiny mivantana amin'ireo mpampiasa anao, angamba satria mahazo aina kokoa ny olona manoratra zavatra ao amin'ny bilaogin'izy ireo izay mety tsy mahazo aina izy ireo milaza aminao amin'ny telefaona na amin'ny fomba fijerinao manokana. Ary raha afaka mamaly mivantana amin'ny hevitra na amin'ny bilaoginao manokana ianao dia handresy daholo.
Ny faharoa dia ilay toa diso hevitra amin'ny tena mangarahara. Raha miaiky ianao hoe “hey, diso tokoa izahay tamin'ny famoahana farany ny vokatray” rehefa efa niampanga anao ho nanodinkodina zavatra ny olona rehetra, ahoana no tena mangarahara? Ny tombony lehibe dia ny fanamoran'ny olona anao satria olona tena manoratra bilaogy izy io, fa tsy departemanta PR tsy misy endrika. “Hadisoana no nataonay. Olombelona ihany isika. Tsy ratsy fanahy isika. Nanandrana izahay. Hanao tsara kokoa isika amin'ny manaraka. ”
4 Okt 2007 amin'ny 12:31 PM
Tena tsara izany! Ny fotoana anananao hanana bilaogy orinasa dia mitarika ny resaka fa tsy mamaly azy. Miara-miasa amin'ny mpivarotra iray izay tapaka fahatapahana 2 aho tato ho ato ary tsy nisy na dia teny iray aza tao amin'ny bilaogin'izy ireo.
Tsy namaky intsony ny bilaogin'izy ireo aho. Mazava fa tsy te ho malalaka sy marina amiko izy ireo, te hiezaka hanafina ny olana izy ireo. Ny fotoana mety indrindra handefasan'izy ireo dia mandritra ny fahatapahana hampahafantatra ny olona fa ambonin'io izy ireo. Fa kosa, very ny fahatokisany ahy rehetra.
7 Okt 2007 amin'ny 1:56 PM
Doug - Lahatsoratra tsara sy tsara. Mino tanteraka aho fa ny fahitsiana, ny tsy fitoviana, ny fahatsoram-po, sns. Dia vonona ny ho iray amin'ireo lohahevitra mipoaka manaraka ho an'ny olona sy ny orinasa amin'ny Internet.
Miorina amin'ny zavatra niainako manokana, nanomboka niara-niasa tamin'ny olona aho momba ny fitantanana ny “lazany an-tserasera” na ny “marika manokana” an-tserasera, izay ampahany amin'ity tranga iray ity. Tsy zava-baovao ny fitantanana laza, saingy ao anatin'ny vanim-potoana tsy dia voafehintsika loatra ary ny motera fikarohana dia midika fa ny atiny - na marina na tsy marina - dia afaka maharitra mandrakizay. Ny algorithm Google, indrindra, dia mirona hanome valisoa ny lazan'ny olona, ​​fa tsy ny fahatokisana izay azo antoka fa mety hametraka olana ho an'ny olona rehetra mba hisarihana ny sain'ny olona sy ny heviny.
Mitovy foana ny hafatro: fehezo amin'ny Internet ny anjaranao. Mamorona ny toetranao nomerika manokana, ny atiny anao manokana. Ary - raha ny lahatsoratra navoakanao mamela ny olona TSY hametraka hevitra izay mazava fa tsy natao ho marina na tena izy - dia lazaiko fa mifanaraka tsara ny hafatray.
7 Okt 2007 amin'ny 2:26 PM
Misaotra ny valiny feno fieritreretana ry Stephanie! Fomba fijery mahaliana momba an'i Google, marina ny anao. Namaky aho Ny lahatsoratr'i David Airey farany teo momba ny fanasaziana an'i Google ary ohatra tonga lafatra io. David dia nanana fahatokisana lehibe, saingy nosazin'ny Google izy noho ilay 'orinasan-tserasera notazoniny' fa tsy ny atiny.
Rehefa lasa manan-danja kokoa ny laza, Google sy ireo motera fikarohana hafa dia mila manasaraka ny fahatokisana sy ny lazany. Tsy tokony nifandray tamin'ny polisy ny rohy Google, hoy izy ireo!
7 Okt 2007 amin'ny 9:47 PM
Mampihomehy fa nivadika fitantanana laza izany. Ny orinasa miaraka amiko, Abraham Harrison, dia manao zavatra fanarenana amin'ny laoniny an-tserasera maro ary manomboka mahita fiakarana liana amin'ireo serivisy ireo izahay. Vao tsy ela akory izay no nitoratako bilaogy momba izany, tao amin'ny bilaogy nivoaka, Marketing Conversation (http://marketingconversation.com/2007/10/04/reputation-management-of-magnets-and-lead-paint/)
Mila mianatra ny orinasa fa ny fitantanana laza dia mihoatra lavitra ny entana nentim-paharazana. Ny fanehoan-kevitra ratsy dia mety haharitra ela.